विवाहको अघिल्लो रात किन तनावमा हुन्छन् युवती?::Nepalese News Portal
काठमाडौं । हरेक युवतीलाई बिवाहको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका कुरा मनमा खेल्छ । युवतीहरु बिवाहभन्दा पहिला आफ्नो पार्टनर र हनिमुनको बारेमा मात्र सोच्छन् भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यस्तो कदापी होइन । अखिर के कारणले तनाव हुन्छ त युवतीहरुलाई ?
विवाह चाँडै त गरिरहेको छैन?
विवाह भन्दा एकरात पहिला केटीहरु कतै आफूले बिवाहको लागि हतार त गरिन भनेर सोच्छन् । उनीहरुलाई बिवाहपछि जिम्मेवारी लिन सक्दिन की भने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ ।
बिवाह गरेर जाने घरमा मलाइ अपनाउछन् कि अपनाउदैनन्?
सेक्सलाई कसरी अस्वीकार गर्ने?